Iarsanisma - Wikipedia
Ny iarsanisma na iaresanisma dia fivavahana naorin' ilay soltàna atao hoe Sahâk tamin' ny faramparan' ny taonjato faha-14 tao Iràna andrefana (Kordistàna iraniana). Amin' ny fiteny korda dia atao hoe yâresân io fivavahana io. Amin' ny teny persàna kosa dia atao hoe اهل حق / Ahl-e Haqq, andian-teny avy amin' ny teny arabo midika hoe "Vahoakan' ny fahamarinana" na "Olon' Andriamanitra". Heverina ho sampan' ny iazdanisma ny iarsanisma (toy ny alevisma, ny iezidisma koa).
Iharan' ny fanenjehana ireo Iarsàna (yârsân) ao Iràna ka atahorana ho fongana. Manoloana ny fikasana hangeja ny Iarsàna dia manomboka mivondrona ho fihetsiketsehana ara-pôlitika izy ireo (ny lehibe indrindra amin' izany dia ny Mouvement démocratique yarsan, MDY, izay natsangana tany Oslo tamin' ny taona 2007).
Hatramin' izay nisiany ka hatramin' ny taonjato faha-20 dia notorina sy nampianarina ao amin' ny fianakaviambe korda ihany sy amin' ireo olona teraka ao amin' io fianakaviambe io (izay atao hoe chekédés) ny finona iarsany, ka tsy isany izany ireo tafiditra tao amin' io fianakaviambe io noho ny fanambadiana (atao hoe chasbédés). Miisa 1 000 000 any ho any ny Iarsàna ka ao Iràna Andrefana sy ao Iràka no tena ahitana azy ireo. Ny ankabetsahan' ny Iarsàna dia Korda na dia ahitana foko hafa toy ny Lôra, ny Laka, ny Azery ary ny Persiana. Misy koa ny Arabo.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Iarsanisma&oldid=1010906"
Dernière modification le 16 Aprily 2021, à 11:47
Voaova farany tamin'ny 16 Aprily 2021 amin'ny 11:47 ity pejy ity.